Fantaro i Kaisanan Ahuan, hampiantrano ny kaonty Twitter e @AsiaLangsOnline ny 3-9 Desambra 2019 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Desambra 2019 16:34 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Italiano, English
Sary natolotr'i Kaisanan Ahuan
Ao anatin'ny fanentanana media sosialy hankalazana ny fahamaroam-piteny an-tserasera manerana an'i Azia, isankerinandro dia hisy hifandimby hitantana ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline ireo mpikatroka sy mpanandrateny samihafa ho an'ny fiteny, hizara ny zava-niainany tamin'ny famelomana aina indray sy fampahafantarana ireo fiteny teratany any amin-dry zareo. Ity fanentanana ity dia fiarahana miasa eo amin'ny Rising Voices, ny Digital Empowerment Foundation, ary ny O Foundation.
Isankerinandro, ireo vahiny mpampiantrano ho avy eo dia hamaly fanontaniana maromaro momba ny làlana nodiaviny sy hanome topimaso fohy momba ny fitenin-dry zareo. Ity ny Fanontaniana sy Valiny niarahana tamin'i Kaisanan Ahuan (@AhuanKaisanan) izay hanome topimaso momba izay horesahany mandritra ny herinandro maha-mpampiantrano azy
Kaisanan no anarako, 26 taona, ao Taiwan afovoany no fiaviako. Avy amin'ny vahoaka Taokas ary ny waroaral no foko misy ahy ao Nantou Puli. Mitolona ho an'ny zon'ireo vazimba teratany (indizeny) no asa ataoko amin'izao fotoana izao.
Satria ny firenena Taokas tsy mbola nomena ny sata maha-indizeny azy araka ny lalàna, izahay ihany no mifampianatra ny fiteninay. Tsy ela akory izay, navoakanay tamin'ity 2019 ity ny rakibolana Taokas.
Hifantoka amin'ireto lohahevitra ireto aho, ireo kolontsain'ny lanonana nentindrazana sy ny kolontsain'ny sakafo nentindrazana.
Antenaiko mba ho fantatry ny olona misimisy kokoa ny fireneko, ny kolontsaina sy ny fomba ahafahana mianatra ny fiteny Taokas any an-tsekoly.